Pyae Phyo (MMiTD): ♪ " Nokia6အား တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ချိမည် " ♫
♪ " Nokia6အား တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ချိမည် " ♫
Nokia6သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက တရုတ်သို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ချိသွားမည်ဟု Nokia မှ ကြေညာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ Nokia သည် 5.5” Full HD display ပါဝင် ပြီး 2.5 D Gorilla Glass ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားကာ Qualcomm Snapdragon 430 processor အား သုံးစွဲထားသည်။
RAM4GB ထိ ပါဝင်ပြီး storage မှာ 64 GB ဖြစ်သည်။ အဓိကကင်မရာမှာ 16 MP ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက်တွင် 8MP ကင်မရာပါဝင်သည်။ Dual amplifier ပါ ၀င်ပြီး HMD Global ၏ အဆိုအရ ပုံမှန်ထက်6dB ပိုမိုကျယ်သောအသံအား ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Dolby Atmos ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားသဖြင့် အသံကို 3D sound effect ပို၍ ရစေမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဖြန့်ချိရာတွင် Google services များလည်း ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး Google Assistant ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
Nokia6သည် ဒေါ်လာ 250 ၀န်းကျင်ဖြင့် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး Nokia6ARTE ကိုိလည်း ထုတ်လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ 64 GB/4 GB RAM တို့ ပါဝင်ပြီး 299 ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။ ARTE ဟူသော စာသားကို ယခင်တစ်ချိန်က Nokia ၏ အကောင်းဆုံး ဖုန်းများ ဥပမာ Nokia 8800 ကဲ့သို့ ဖုန်းများတွင် တွေ့ကြရသည်။
▼ 2017 ( 2774 )
♪ Sing! Karaoke by Smule v3.9.7 (Latest Version) & VIP Access ရအောင် ပြုလုပ်နည်း [1000% Working] ♫
Sing! Karaoke by Smule ကို VIP Access Unlock ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁၀၀၀% ကျိန်းသေရတဲ့နည်းပါ။ အရင်းဆံ...